Ni Hin Chun Hnu 2:00pm Ah Ralhrang 200 Rual Cu, Pego Khuapi Chung Ah An Lut I, MIpi Hna Cu Meithal In An Kah Hna I,Mipi Tamtuk An Thi. – Chintanbo
Kawl Ralhrang hna nih nihin suimilam 2:00pm ah khan Pego khuapi chungah an lut i, mipi cu meithal in an kah hna tiah theih asi.Mizzima nihachim nak ah cun, Minungathi mi hna hiatuah cun fiang tein theih khawh asi rih lo i,a hliam mi zawng tamtuk an um tiahachim.
A thi mi hna lak ah hin, kawl ralhrang pawl zawng an ni tel ve tiah theih asi.Nihin cun hnu suimilam 2:00pm hrawng ah khan kawl ralhrang 200 rual cu,hriamnam ngan he pego khu chungah an lut i,Fortfortresses pathum bak cu an kah i,achia dih tiah theih asi.an rak luh bak in,Fort hmai i minung7hna cu, ralhrang kah nakin an thi tiah mit inahmutu nih cunachim.
A tanglei ah hin kawl ca inaum i,a fiang deuh lai
ပဲခူး တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ကျဆုံး ၊ဒဏ်ရာရရှိသူ များပြား
ပဲခူးမြို့ မှာ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၅နာရီအချိန်က အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မဂ္ဂတစ် ၊ ပုဏ္ဍားစု ၊ ဆံတော်တွင်း အဓိကခံတပ်သုံးခု ကိုလက်နက်ကြီး အပါအဝင် သေနတ်များဖြင့် အကြမ်းဖက် ဖြစ်ခွင်းမှုကြောင့် သေဆုံး ၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“မနက်ထဲက အဓိက ခံတပ်သုံးခုကို လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာ ၊ ၇ချက်လောက်ရှိတယ်။ခံတပ်က လူတွေ ကျတယ် ။ မနက်ပိုင်းအထိတော့ ၄ ယောက်ကျသွားတယ်။ ခံတပ်က လူတွေက အခုရှောင်နေကြတယ်။ နယ်မြေခံမဟုတ်တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂက ကလေးတွေလည်းပါကြတယ်။ မဂ္ဂတစ်လမ်းတစ်လျှောက်က ကျဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကို ပြန်မကောက်နိုင်သေးဘူး။ လောလောဆယ် သိရသလောက် ပြောနေတာ ၂၀ ကျော်ပြီးကြားတယ်။ မျက်မြင်မဟုတ်တော့ အတည်မပြုနိုင် ဖြစ်နေတယ် ” ဟုပဲခူးမြို့မှနေထိုင်တဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။
မွန်းလွဲပိုင်း ၂နာရီအချိန် အထိ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ လှည့်လည်နေပြီး ဆံတော်တွင်း တွင် စခန်းချထားလျက်ရှိပြီးလမ်းဆုံလမ်းခွ နှင့် လမ်းကြားထိပ်တို့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ၊ ၅ ဦး အထိ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး အကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှာ အင်အား ၂၀၀ ခန့်ဖြင့် ပဲခူးမြို့ ခံတပ်သုံးခု ကို အကြမ်းဖက် စတင်ဖြိုခွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Tu Zan Sml 8:30pm UN Security Council Tuah A Si Lai i, CRPH Foreign Affair Minister Daw Zin Mar Aung Nih Bia A Chim Lai.Russia Le China An Ni Tel Lai Lo.